Indlu kaMalume uMarcelo - I-Airbnb
Indlu kaMalume uMarcelo
Pajares de Pedraza, Castilla y León, Spain
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguEusebia
Wamkelekile kwindlu kaMalume uMarcelo.
Yindlu endala ebuyiselweyo, efikelelekayo kwiindwendwe ezinokuhamba okuncitshisiweyo.
Eli khaya lipholileyo linendawo engaqhelekanga. Ifumaneka ngaphakathi kweSierra Norte de Guadarrama Natural Park, iimitha ezimbalwa ukusuka kuMlambo iCega, i-6.5 km ukusuka kwidolophu yasePedraza, i-25 km ukusuka eSepúlveda kunye neekhilomitha ezingaphantsi kwe-40 ukusuka eSegovia.
Ukuba ujonge indawo yokuphumla, yonwabele indawo engqongileyo kwaye wenze imisebenzi, ungalibazisi ukuza.
Indlu yohlulwe kwimigangatho emibini. Umgangatho ophantsi, wonke ufikeleleka kubantu abanokuhamba okucuthiweyo, unegumbi lokulala eliphindwe kabini, igumbi lokuhlambela elipheleleyo, ikhitshi elivulekele kwigumbi lokuhlala elinendawo yomlilo kunye nokufikelela kwi-75m2 patio, enendawo yokutyela yangaphandle. Umnyango ongasemva wepatio unxibelelana nomlambo iCega.
Kumgangatho ongaphezulu kukho igumbi lokuhlambela eligcweleyo kunye namagumbi okulala amathathu ahlukaniswe ngemibala:
-igumbi elibhlowu: elineebhedi ezimbini ezingatshatanga.
-Igumbi Beige: ngebhedi kabini.
-Igumbi letshokolethi: elineebhedi ezimbini ezimbini kunye nebalcony.
Indlu inezixhobo eziyimfuneko zokusetyenziswa kwayo kunye nokuzonwabisa, ukusuka kumashiti kunye neetawuli, ukuya kwizinto zasekhitshini kunye nezixhobo zombane. Ungalibali umthwalo weenkuni eziko.
Ikwindawo entle kakhulu, kuba yeyePaki yeNdalo yaseSierra Norte de Guadarrama, kwaye yimizuzu eli-15 ukusuka kwiHoces del Río Duratón Natural Park. Ukongeza, ikwi-6.5 km ukusuka kwidolophu ephakathi yasePedraza kunye nemizuzu engama-30 ukusuka kwidolophu yaseSepúlveda okanye eTurégano.
Kungenxa yoko le nto ikuvumela ukuba wenze imisebenzi eyahlukeneyo:
-Hamba ecaleni kwendlela yabalobi bomlambo iCega.
-ndwendwela idolophu yasePedraza kunye nendlu ye-Imperial Eagle.
-Yonwabela indlela ye-kayak ngeHoces del Río Duratón Natural Park, apho siya kudibana neyona koloni inkulu yamaxhalanga egriffon, ngaphandle kokujonga amabhodlo eLa Hoz Convent kunye neSan Frutos hermitage.
Kwakhona sincoma i-gastronomy yendawo, ebonakaliswe ngokusetyenziswa kwee-ovens eziphekwe ngamaplanga kwi-roast yayo.
Umbuki zindwendwe ngu- Eusebia
Ndiya kuba kwindawo yeendwendwe ngexesha lokuhlala kuso nasiphi na isiganeko esingalindelekanga esinokuvela.
Inombolo yomthetho: VuT-40/367